Psalmen 69 HTB - Nnwom 69 ASCB
1Ao Onyankopɔn, gye me nkwa
na nsuo no abɛdeda me kɔn mu.
2Meremem wɔ atɛkyɛ a emu dɔ mu,
wɔ baabi a me nan nnya siberɛ.
Maduru subunu mu
na nsuo abu afa me so.
3Mafrɛ mabrɛ sɛ mepɛ mmoa.
Me mene mu awe.
na merehwehwɛ me Onyankopɔn.
4Wɔn a wɔtane me kwa no dɔɔso
sene me tiri so nwi;
wɔn a wɔtane me kwa no dɔɔso,
Wɔhyɛ me sɛ mennane
deɛ menwiaaɛ no mma.
5Ao Onyankopɔn, wonim me kwasea a mayɛ;
mʼafɔdie nhintaa wo.
6Mma wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no
anim ngu ase ɛsiane me enti,
Ao Awurade, Asafo Awurade;
anim ngu ase me enti,
Ao Israel Onyankopɔn.
7Wo enti wobu me animtiaa,
na aniwuo akata mʼanim.
8Mete sɛ ɔhɔhoɔ wɔ me nuanom mu,
mete sɛ ɔmamfrani wɔ me maame mmammarima mu,
9na wo fie ho mmɔdemmɔ hyɛ me so,
wɔn a wɔbɔ wo ahohora no animtiabuo abɛda me so.
10Sɛ metwa adwo na medi mmuada a
11sɛ mefira ayitoma a
nnipa de me yɛ aseredeɛ.
12Wɔn a wɔtete ɛpono no ano no sere me,
na akɔwensafoɔ de me din to dwom.
13Nanso mɛbɔ wo mpaeɛ, Ao Awurade,
wɔ wʼadom berɛ mu;
wɔ wʼadɔeɛ kɛseɛ no enti, Ao Onyankopɔn,
fa wo nokorɛ nkwagyeɛ no gye me so.
14Yi me firi atɛkyɛ no mu,
gye me firi wɔn a wɔtane me no nsam,
ne nsu bunu mu.
15Mma nsuo nnyiri mfa me
anaa ebunu mmene me
anaa amena nkata me so.
16Ao Awurade, gye me so firi wʼadɔeɛ a ɛyɛ no mu;
wʼadom enti, dane bɛhwɛ me.
17Mfa wʼanim nhinta wo ɔsomfoɔ;
18Twi bɛn me na gye me;
gye me nkwa, mʼatamfoɔ enti.
19Wonim sɛdeɛ wɔkasa tia me, gu mʼanim ase na wɔtiatia mʼanim;
wʼani tua mʼatamfoɔ nyinaa.
20Kasatia ahyɛ mʼakoma so
ama mayɛ sɛ obi a ɔnni ɔboafoɔ;
mepɛɛ awerɛkyekyerɛ nanso mannya bi,
mepɛɛ ɔwerɛkyekyefoɔ, nanso manhunu bi.
21Wɔde bɔnwoma guu mʼaduane mu,
osukɔm dee me no, wɔmaa me nsã nwononwono.
22Ma wɔn didipono a ɛsi wɔn anim nyi wɔn sɛ afidie;
ma ɛnyɛ akatua ne afidie mma wɔn.
23Ma wɔn ani so nyɛ wɔn kusuu na wɔanhunu adeɛ,
na ma wɔn akyi nkuntunu afebɔɔ.
24Hwie wʼabufuhyeɛ gu wɔn so;
na ma wʼabofuo huuhuuhu no mmra wɔn so.
25Ma wɔn atenaeɛ nyɛ amamfo;
mma obiara ntena wɔn ntomadan mu.
26Wɔtaa wɔn a wopira wɔn no,
wɔka wɔn a wopira wɔn no amanehunu ho asɛm.
27Fa amumuyɛ mu amumuyɛ ho soboɔ bɔ wɔn;
mma wɔnnya wo nkwagyeɛ mu kyɛfa.
28Pepa wɔn din firi nkwa nwoma no mu,
mfa wɔn din nka ateneneefoɔ deɛ ho.
29Mewɔ ɔyea ne ahohiahia mu;
Ao Onyankopɔn, ma wo nkwagyeɛ no mmɔ me ho ban.
30Mede dwomtoɔ bɛyi Onyankopɔn din ayɛ
na mede aseda ahyɛ no animuonyam.
31Yei bɛsɔ Awurade ani yie asene nantwie,
asene nantwinini a ɔtua mmɛn na ɔwɔ tɔte.
32Mmɔborɔni bɛhunu na nʼani agye,
mo a mohwehwɛ Onyankopɔn no akoma bɛnya nkwa.
33Awurade tie wɔn a adeɛ ahia wɔn,
na ɔmmu ne nkurɔfoɔ nneduafoɔ animtiaa.
ɛpo ne deɛ ɛkeka ne ho wɔ mu nyinaa,
35ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɛgye Sion nkwa
na wakyekyere Yuda nkuropɔn no bio.
Afei nnipa bɛtena mu na ayɛ wɔn dea;
36Nʼasomfoɔ asefoɔ na wɔbɛfa hɔ,
ASCB : Nnwom 69